उद्योग वाणिज्य महासंघको विवाद उत्कर्षमा
उद्योग वाणिज्य महासंघको विवाद उत्कर्षमा राणाको नियत प्रति गोल्छा, ढकाल र प्रधानहरु शंसकित !
जनतापाटी शुक्रवार, जेठ ९, २०७७, ११:५४:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । कोरोना १९ ले गर्दा उद्योग व्यवसाय संचालन हुन नसक्दा देशभरका उद्योगी व्यापारीहरु अत्तालिइरहेको बेला उनीहरुको छाता संगठन, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा भने ‘कुर्सीको खेल’ उत्कर्षमा पुगेको छ ।
महासंघको अहिलेको नेतृत्वको पदावधि २०७६ चैत २९ गतेबाट समाप्त भएको छ । त्यसयता महासंघको कार्य समितिको वैधानिक हैसियत के हुने भन्ने बारेमा अध्यक्ष भवानी राणा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा समुहविचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै अध्यक्ष हुने विधान अनुसार चैत्र २९ गते साधारण सभा भएको भए यति बेला गोल्छा अध्यक्ष भैसक्ने थिए । त्यतिबेलाको साधारण सभा स्थगित गरेपछि महासंघले जेठ ७ र ८ गते काठमाण्डौमा साधारण सभा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, कोरोना आतंक नियन्त्रणको लागि लकडाउन शुरु भएपछि महासंघले जेठ ७ र ८ गतेको लागि घोषणा गरेको साधारण सभा र निर्वाचन पनि स्थगित भयो । र , अव कहिले हुन्छ, त्यो पनि यकिन छैन ।
गोल्छा पक्षधरहरुले वर्तमान कार्य समितिको विधान अनुसारको समय अवधि सकिएकोले यो स्वतः काम चलाउ तदर्थ समितिमा परिणत भएको बताउंदै कुनै नीतिगत निर्णय नगर्न राणालाई दवाव दिंदै आएका छन् । साथै उनीहरुले गोल्छालाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिन समेत राणालाई दवाव दिइरहेका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेद्वारी घोषणा गरि देशव्यापी रुपमा आफ्नो पक्षमा मत तान्न अभियान चलाइरहेका राणा कार्यकालका उपाध्यक्षहरु चन्द्र ढकाल र किशोर प्रधानले पनि गोल्छालाई कार्यवाहक अध्यक्ष दिन दवाव दिइरहेका छन् ।
तर राणा भने उनीहरुको असहमतीलाई वेवास्ता गर्दे पूर्णकालिन अध्यक्षको रुपमै नीतिगत निर्णयहरु समेत गर्न थालेपछि विवाद चर्किएको हो । राणाले कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न समस्या समाधानको लागि समेत प्रभावकारीरुपमा समन्वय गर्न नसकेको आवाज महासंघ भित्र उठिरहेको छ । राणाकै कारण उद्योग धन्दालाई सरकारबाट राहत दिलाउने र मजदूरहरुको तलव सुविधा समायोजन गर्ने विषयमा समेत महासंघ अनिर्णयको बन्दी भएको महासंघकै पदाधिकारीहरुले बताउंदै आएका छन् । राणाले सरकारसंग वार्ता गर्दा मात्र होइन, मजदूर नेताहरुसंग तलव सुविधा निर्धारण गर्दासमेत उद्योगि व्यवसायीको हितको रक्षा गर्ने गरि प्रभावकारीरुपमा काम गर्न नसकेको गुनासो व्यवसायीहरुले गर्दै आएका छन् ।
महासंघका दवावकै कारण राणाले जेठ १२ गते स्थायी समितिको वैठक बोलाएकी छन् । वैठकले स्थगित अवस्थामा रहेको महासंघको ५४ औं वार्षिक साधारण सभाको अर्काे मिति घोषणा गर्ने संभावना रहेको बताइन्छ । तर, राणा भने अहिले नै मिति तोक्ने कुरामा असहमत रहेको र ‘कावु वाहिरको परिस्थितिको कारण यही कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिने’ प्रयासमा लागिरहेको बताइएको छ ।
फिल्म प्रमोसनमा अस्ट्रेलिया पुगेकी बर्षाको यस्तो हट अवतार ! आइतवार, जेठ १९, २०७६, १३:२९:००
चितवनको तीनवटै वडामा कांग्रेसले मार्‍यो बाजी आइतवार, मंसिर १५, २०७६, ०७:०७:००
हुवावेको अटोपप–अपक्यामरा भएको वाई नाइनप्राइम-२०१९ स्मार्टफोन नेपाली बजारमा मंगलवार, श्रावण ७, २०७६, १०:२१:००
फौजी कीराको प्रकोपले मकै बालीमा क्षति
चालु आर्थिक वर्षमा मुलकको आर्थिक वृद्धि खुम्चिने